Tongotra amponga akoho misy saosy paiso - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Carnes39 minitraOlona 4
Tiako ny manandrana lovia vaovao ao amin'ny varoma, tsy misy fomba fahandro izay tsy omaniko ao aminy izay tsy tiako. Mivoaka mamy be daholo izy rehetra ary matsiro. Raha manomana trondro aho dia mivoaka tsara, raha legioma dia toa vao avy nalaina avy tao amin'ny zaridaina izy ary miaraka amin'ny hena dia mahalasa saina ahy ny mahita fa matsiro izany.
Tamin'ity indray mitoraka ity dia naniry ny hanandrana ireto gadona akoho akoho ireto aho, nieritreritra aho fa mety ho lovia mety na dia ireo andriambaviko aza. Na dia efa fantatro aza fa ny zokiko indrindra dia tiako, fa tsy misy lovia izay tsy tiany raha mitondra ny malalany izy ireo paiso.
Tsotra ny fanaovana na eo aza ny fangaro hafa, fa ny maro amin'izy ireo dia azo soloina, ohatra, tsy nanana sakamalao aho ary nasiako tongolo sy tongolo lay 2, tsy nanana chives aho ary namafy persil.
Manoro hevitra anao aho hanararaotra ny varoma hanomanana vitsivitsy Ovy steamed izay hiaraka amin'ny feny hanaovana azy lovia maivana.
1 Tongotra amponga akoho misy saosy paiso
Araraoty tsara ity varoma ity!
Fotoana hiketrehana: 34M
Fotoana manontolo: 39M
Ho an'ny kaontenera varoma:
Karamelan'ny ranoka 10 g
Saosy soja 20 g
Vinaingitra sherry sotro kely 1 sotro
1 - 2 sprigs thyme vaovao
Vatokely akoho tsy misy bonona 4 ao anaty fonosana
Ho an'ny saosy paiso:
150 g amam-borona
Paiso 3, pitted ary masaka (peeled and halved, pitted)
sira sy dipoavatra hanandrana)
chives, voatetika (ho an'ny famafazana)
Ataovy ao anaty vera ilay karamel, saosy, menaka, vinaingitra ary thyme. Izahay dia manao fandaharana 15 segondra, hafainganam-pandeha 7.
Borosio ireo fonosana miaraka amin'ity fangaro ity, ahodia ary aforeto anaty sarimihetsika mangarahara. Ataonay ao anaty fitoeram-bokatra sy tahiry varoma izy ireo.
Tsy nanasa ny vera izahay dia nametraka ny sakamalao sy dibera. Miala amin'ny programa izahay 3 segondra, hafainganam-pandeha 5.
Miaraka amin'ny spatula, ampidinintsika ny sisa tavela amin'ny sakamalaho avy amin'ny fonony sy ny atin'ny fitaratra mankany amin'ny lelany. Izahay dia manao fandaharana 7 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Ampianay ny ron-kena sy ny divay. Apetrakay amin'ny toerany sy ny fandaharan'asany ny kaonteneran'ny varoma 25 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Rehefa tapitra ny fotoana dia ampio ao anaty vera ilay ranona mahandro avy eo amin'ny feny, ampio ny paiso, sira sy dipoavatra ary afangaro mandritra ny fandaharana 30 segondra, hafainganam-pandeha 5-10.
Izahay dia manamarina ny firafitry ny saosy, raha tiantsika ny finer dia manomana segondra vitsy hafa amin'ny hafainganam-pandeha mitovy isika.
Manolotra ny fonosana miaraka amin'ny saosy izahay ary miaraka amin'ny tohiny voafantina.
Fanazavana fanampiny - Fomba fahandro fototra: ovy steamed
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Carnes, Celiac, Tsotra, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny adiny 1, Resaka varoma
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Carnes » Tongotra amponga akoho misy saosy paiso
Mari masoandro dia hoy izy:
Miarahaba anao amin'ny bilaogy, tohizo, amin'ireo rehetra hitako fa ity no tiako indrindra
Valio i Mari sol
Misaotra anao nanaraka anay Mari sol. Faly aho fa tianao ny fomba fahitanay.
Ny resin'izy ireo dia tena tsara, nanompo ahy be dia be izy ireo hatramin'ny voalohany, niahiahy aza aho tamin'ny fikirakirana an'i Varoma, saingy isan'andro dia matoky tena bebe kokoa aho. Te hanontany anao aho hoe inona ny sombin-kazo, eto Ekoatera tsy mbola henoko io fe-potoana io. MISAOTRA
Tongolo Eva dia tongolo kely sy boribory izay mety tsara amin'ny sakafom-boaloboka fa raha tsy hitanao dia azonao atao ny mametraka tongolo mahazatra sy tongolo lay. Io fangaro io dia mitovy amin'ny tsiron'ny bawang.
Mmmmmmmm inona no mahafaly !! Ny marina dia rehefa nampiasa ny varoma aho hanamboarana hena dia nampiasako ireo kitapo fanaovan-mofo, fa tsy mbola nofonosiko nofonosina plastika ilay hena. Mila manandrana aho! Fanontaniana iray, mieritreritra ve ianao fa handeha tsara amin'ny paiso amin'ny syrup?
Ny marina dia mino aho fa eny, ritra tsara tsy hitako izay olana satria mamy miaraka amin'ny caramel ranon-javatra ny saosy.
Inma Benedict dia hoy izy:
Ho solon'ny zavatra, maninona aho no afaka manova ny soja ??? Eto amin'ny tanànako dia tsy misy saosy ary tsy haiko ny antony mahasolo azy. Misaotra an'i cicas amin'ny pejinao, oroka
Valiny tamin'i Inma Benedicto
Inma, ny marina dia izao tsy azoko lazaina aminao ny antony ahafahanay manolo saosy soja. Manantena aho fa misy mahita ny fanontanianao ary manolotra zavatra ho anay.
Fanontaniana iray Silvia, azonao atao ve ny manova ny paiso ho an'ny mananasy? Ao an-trano dia tianao bebe kokoa ny mananasy. Misaotra
MAYAI dia hoy izy:
Ao an-tranoko dia tiako kokoa ny mananasy…. Angamba raha miteny amiko ny fomba fanovana ianao dia azoko omena ny fianakaviako ilay fomba fahandro. Misaotra sy arahaba.
Valiny amin'i MAYAI
Heveriko fa mety ho tsara koa. Raha manandrana ianao dia hilaza aminay.
Tsara ianao ... manaitra ahy foana ianao amin'ny resanao. Ao an-tranoko dia tsy avelany hanao andrana be loatra aho… fa ny fomba fanamboarana isan-karazany no anaovanao… tena ilaina amiko ianao. Tiako ny sarin'ireo lovia…. tohizo fa ... ianareo no mahay indrindra. Misaotra amin'ny zavatra rehetra.
Salama, manao ahoana ianao? Te hanontany anao aho fa ny karajia ranon-javatra no ampiasainay mba hisaorana ny fisaorana …………………………… ..
Raha i Sandra no ataonay ho an'ny puddings. Mirary ny soa indrindra
Heveriko fa lovia tena mampientanentana izany, andramako izany.
Tena tsara sy mahasalama. Rehefa manao izany dia tsy mitondra tavy ny varoma. Mety izany. Hilaza aminay ianao raha tianao izy ireo.
Rose Kullström dia hoy izy:
Salama ary misaotra, ilay film lazainao fa "gladwrap" plastika manify hanarona sakafo ao anaty frigo? tsara be ilay recette. mavokely
Rosa, ny sarimihetsika ampiasaiko dia mahazatra avy amin'ny marika albal na mercadona. Tsy mila zavatra manokana ianao.
Maka tahaka ny resipeo eto izy ireo http://www.cocinandoando.com/receta-thermomix-contramuslos-de-pollo-con-salsa-de-melocoton/
Misaotra betsaka anao nampahafantatra anay, Sebas. Andao jerena izany. Mirary ny soa indrindra.
Ny marina dia tena tsara ny resinao, tena mahomby aho amin'ireo rehetra nataoko, tato ho ato izy ireo no roscón de reyes sy lasagna, samy SPECTACULAR, ary heveriko fa hataoko amin'ity herinandro ity fa miaraka amina paiso amin'ny syrup, ary Mba tsy fotsy loatra ny akoho, dia hofeheziko amin'ny diloilo iray latsaka ao anaty vilany, toa tsy dia hita maso intsony ilay izy ary mijanona ao anatiny daholo ny ranony, na dia misy varoma aza ny zava-drehetra tsara foana.
Manantena aho fa tianao izany, Monica. Holazainao amiko. Mirary ny soa indrindra.
Holatra natsatsika dibera maître d'hôtel
Voasarimakirana watermelon sy banana